२० बिधामा ‘नेशनल फेस्टिबल म्युजिक अवार्ड’ हुने - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
काठमाडौं । अग्रजलाई सम्मान नव प्रतिभालाई प्रोत्साहन कला, गला, संस्कृती संरक्षणमा हाम्रो अभियान भन्ने मुलनारा सहित ‘नेशनल फेस्टिबल म्युजिक अवार्ड’ हुने भएको छ । २० विधामा हुने भनिएको यस अवार्डमा सिर्जना सहभागि गराउनका लागि आबेदन फर्म खुलेको छ ।
सामना म्युजिक क्रियशन प्रा.लि. द्धारा आयोजित यस ‘नेशनल फेस्टिबल म्युजिक अवार्ड’ मा आबेदन फर्म शुल्क रु १ हजार निर्धारण गरिएको छ । यस अवार्डमा दशै, तिहार र प्रदेशी गीत मात्र समाबेश गरिने छ । गायक गायिकाको हकमा भिडियो बजारमा नआएतापनि अडियोको हकमा सहभागी हुन सकिने कुरा आयोजक पक्षले जनाएको छ ।